बि हे गरे को १२ घण्टा नबि त्दै दिदी बहि नी ले लिए सं सा र बाट बि दा..(भिडियोसहित) – Taja Khawar
विमानस्थलमा सुन बोकेर आउने १७ भरियाबाट झण्डै १ केजी सुन ब,रा,म,द
बि हे गरे को १२ घण्टा नबि त्दै दिदी बहि नी ले लिए सं सा र बाट बि दा..(भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र १७, २०७८ समय: १९:५६:१६
विवाह एउटा पुरूष र स्त्रीकाबीच सम्बन्ध कायम गराउने गठबन्धन हो । सामाजिक रीत-चलन र पद्धति हो, संस्कार र बन्धन हो । विवाह परिणय हो र परिणय विवाह हो । विवाह सामाजिक, धार्मिक तथा कानूनी हुने गर्दछ ।
मानिस स्वभावैले सामाजिक प्राणी हो । समाजविनाको मानवको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सृष्टिका यावत् जीव मात्र खोजमेल गरेर जीवन चलाउँछन् तर मान्छे खनेर, खोस्रेर, रोपेर खाने प्राणी हो । मान्छे आफूलाई आवश्यक परेको वस्तुको निर्माण गर्ने हैसियत राख्दछ । त्यसैले पनि मान्छेलाई अरु जीवको तुलनामा चेतनशील मान्नै पर्दछ । खानु मात्र पनि मान्छेको जीवन होइन भन्ने कुरा उसको अन्तस:मा घुसेको पनि छ ।समाजमा व्यक्ति व्यक्तिले आफूखुसी मन लागेको गर्दै हिँड्दा भ द्रगोल र अव्यवस्थाको हालत हुँदै जाँदा मान्छेले नियम,विधि,कानून,संस्कार,धर्म आदिको निर्माण गरेको देखिन्छ । जसले जोसँग पनि आफू खुसी शा’रीरि’क स’म्बन्ध बनाउँदै जाँदा समुदायमा अन्योलको वातावरण बनेकोले मान्छेले मान्छेसँगको शारीरिक सम्बन्ध बनाउने कुरालाई विवाह प्रणाली वा पद्धतिमा ढालेको देखिन्छ ।
यो पद्धति समय, परिवेश, परिस्थिति, स्थान अनुसार आआफ्नै खालको बन्दै गएको पाइन्छ । विवाहको चलनमा देशको नारी पुरूषको सङ्ख्याको पनि ठूलै भूमिका रहेको देखिन्छ ।
जसरी मानसिक प्रेम नभई शारीरिक प्रेम हुन सक्दैन, त्यसै गरी शारीरिक प्रेमले अन्तमा मानसिक प्रेम नजगाई रहन सक्दैन अर्थात् आत्मिक वा शारीरिक दुवै खाले प्रेममा मनको भूमिका नै सर्वोपरि हुन्छ । मन नै त्यस्तो एउटा तरङ्ग हो जसले प्रेम जगाउँदछ र मान्छे वा प्राणीलाई हरेक कुरामा सक्रिय राख्दछ । यदि आत्मिक वा शारीरिक प्रेमविना कुनै काम गरिन्छ भने त्यो प्रेम नभई अरु केही लोभ, लालच वा स्वार्थ आदि मात्र हो ।
मनोविज्ञानका ज्ञाता फयडका अनुसार त संसारमा कुनै जीव प्रेमविना केही गर्देन रे ! बाँच्नु र मर्नुमा पनि प्रेमकै हात छ रे ! उनी त स्पष्टै भन्छन् पनि मान्छे जे गर्छ गराउँछ, जे हेर्छ हेराउँछ, जे सोच्छ सोचाउँछ । सबैका एक मात्र कारण स’म्भोग मात्र हो । मान्छेद्वारा संसारमा जे भए जे गरे ती सबैको मूल कारण स’म्भोग हो । हुन पनि यो संसारमा भएका सबै निर्माण र संहारको कारण प्रेम नै हो ।
स’म्भोग एक अर्थमा प्रेमको जन्मदाता पनि हो, प्रेमकै तत्व पनि हो । स’म्भोगले नै प्रेमको जगलाई जन्माउने, बचाउने, घटाउने, बढाउने र मराउनेसम्मको भूमिका खेलिरहेको छ । वास्तवमा भाव, सोच र विचारको उद्गम पनि स’म्भोग नै हो ।
मान्छेले गर्ने गराउने सबै सुख वा दु:खको मूल कारक तत्व स’म्भोग नै हो । मैले मानवको चेतनाको धरातलको विकासको मूल कारण स’म्भोग र हातको बुढी औँला नै हो भनेमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ? अनुहारको भावले देखाउने सुख, आनन्द, पीडा र दु:खको प्रत्यक्ष प्रमाण हो सामुन्नेको स’म्भोग । स’म्भोगकालमा विपरीतले अनुहार हेर्ने मानवबाहेक कुन प्राणी छ ? पर्नुभयो के अलमलमा ? सोच्नुस् सोच्दैमा के बिग्रन्छ र ?
Last Updated on: September 2nd, 2021 at 8:16 pm